News - Ryan Truscott in Zimbabwe - RFI
Ryan Truscott in Zimbabwe 12next ›last » 19/02/2015 -
Report: Zimbabwe Zimbabwe opposition wants Mugabe birthday bash cancelled Zimbabwe’s main opposition party has demanded that President Robert Mugabe call off his 91st birthday party scheduled for later this month. 13/02/2015 -
Report: Zimbabwe Row over elephant on menu at Mugabe’s 91st birthday party A 91st birthday party for Zimbabwe's President Robert Mugabe is just two weeks away now and it looks as if partygoers will be eating elephant. 05/02/2015 -
Report: Zimbabwe Zimbabwean headmistress charged with murder after caning schoolboy A school headmistress has appeared in court in Zimbabwe facing a murder charge after a pupil she caned later died. 29/01/2015 -
France - Zimbabwe French delegation explores investment in Zimbabwe A 10-member French delegation is in Zimbabwe to assess trade prospects and team members have already met President Robert Mugabe. 14/01/2015 -
Report: Zimbabwe Zanu-PF Mujuru faction accuses Mugabes of 'greed and hate' In Zimbabwe a prominent ally of ousted vice-president Joice Mujuru has issued a public attack on President Robert Mugabe and his wife Grace. 11/12/2014 -
Report: Zimbabwe Mugabe appoints new vice-presidents as Zanu-PF succession battle continues Zimbabwe's President Robert Mugabe has ended weeks of speculation by naming his two new vice-presidents. 05/12/2014 -
Report: Zimbabwe Mugabe slams 'traitors' at Zanu-PF congress as Mujuru stays away Zimbabwe's President Robert Mugabe has opened a three-day congress of his ruling party with an angry rant against "traitors" within Zanu-PF. 03/12/2014 -
Report: Zimbabwe Grace Mugabe guns for Vice-President Mujuru at Zanu-PF congress Zimbabwe's First Lady Grace Mugabe has got her Way … or rather she's just had a road named after her. 20/11/2014 -
REPORT: Zimbabwe Zimbabwean 2002 elections 'neither free nor fair' says South African report For over a decade, Zimbabwe's opposition leader Morgan Tsvangirai has been trying to defeat President Robert Mugabe at the polls. 01/03/2013 -
Report: Zimbabwe Mugabe holds 600,000-dollar birthday bash Supporters of Zimbabwean President Robert Mugabe will be marking his 89th birthday Saturday with a party in the northern mining town of Bindura. 12next ›last » Listen to RFI